Itiyoophiyaan bara Faranjootaa 2016tti biyyoota Afriikaa hoteelonni hedduu keessatti ijaaramaa jiran 10 keessaa tokko taate
Finfinnee: Ebila 09, 2008 (oromiapo) Itiyoophiyaan bara Faranjootaa 2016tti biyyoota Afriikaa hoteelonni kutaalee hedduu qaban keessatti ijaaramaa jiran 10 keessaa tokko taate.
Qorannoon dhaabbati ‘W Hospitality’ jedhamu ifoomse oomisha biyya keessaa waliigalaa biyyootaa fi tuurizimii koonfiransii irraa hangam akka fayyadaman ilaaleera.
Haala kanaan Itiyoophiyaa fi Keeniyaan biyyoota Afriikaa 10 bara Faranjootaa keessa jirru keessa hoteelotni kutaalee hedduu qaban keessatti ijaaramaa jiran jalatti haammatamaniiru.
Itiyoophiyaatti hoteelonni idil-addunyaa 12 walumaagalatti kutaalee 2,460 qaban bara qabame kana keessa akka ijaaramanidha ragaan kun kan mul’isu.
Keeniyaan gamasheetiin hoteelota 16 kutaalee 2,956 qaban akka ijaarsiftu himameera.
Akka raaga kanaatti Keeniyaan Itiyoophiyaa ofitti aansitee sadarkaa 7ffaa qabatteetti.
Naayijeeriyaa fi Angoolaan ammoo hoteelota kutaalee cisichaa 10,222 fi 7,560 qaban bara keessa jirru kana keessa akka ijaaran waan raagameef sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa qabataniiru.
Itiyoophiyaa fi keeniyaan teessoo dhaabbilee ardii fi idil-addunyaa ta’uunsaanii fi fayyadamummaan tuurizimii koonfiransii irraa argatan guddataa waan dhufeef biyyoota kanneenitti hoteelonni baay’inaan ijaaramaa akka jiran ka’eera.
Abbootiin-qabeenyaa damee industirii hoteelaa Afriikaa Kaabaa irra gara Baha Afriikaatti xiyyeeffachuu jalqabuusaanii eereera qorannuchi.
Raagni Dhaabbata Maallaqaa Idil-addunyaa (IMF) guddinni dinagdee biyyoota Sahaaraan gadii bara kana dhibbantaa 4, bara 2017tti ammoo dhibbantaa 4.7 akka guddatu mul’isa.
Kun ammoo bara 2015tti kan irra ture guddina dhibbantaa 3.5 irra saffina qaba.
Hiikuu fi Fe’uu: Maarituu Galaalchaa
Torbe Kana 45133
Ji'a Kana 171262
01/05/07 irraa eggalee 6553005
Kan Amma Daawwachaa Jiran 37